၂၀၁၆ အင်ဖာငလျင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ (၂၀၁၆-၀၁-၀၄)
4:35 a.m IST (UTC+5)
၅၅.၀ km (၃၄.၂ mi)
24°50′02″N 93°39′22″E﻿ / ﻿24.834°N 93.656°E﻿ / 24.834; 93.656ကိုဩဒိနိတ်: 24°50′02″N 93°39′22″E﻿ / ﻿24.834°N 93.656°E﻿ / 24.834; 93.656
~၂၀၀ ခန့် ဒဏ်ရာရ
၂၀၁၆ အင်ဖာငလျင် သည် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဏိပူရပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ပမာဏ ၆.၇ ရှိသည့် ငလျင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး Mercalli ပြင်းအားသည် ၇ (အလွန်ပြင်းထန်) ဖြစ်သည်။ ငလျင်ဗဟိုချက်သည် Tamenglong ခရိုင်၊ အင်ဖာမြို့၏ အနောက်ဘက် ၃၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ဖြစ်သည်။ လူအနည်းဆုံး ၁၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ လူ ၂၀၀ သည်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ အဆောက်အဦများစွာသည် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင်လည်း ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင်လည်း ငလျင်ဒဏ်ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရသည်။ ငလျင်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် မနက် ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ် (23:05 UTC,3January) တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ သီးခြားနေရာတစ်ခုကို ဗဟိုပြုခဲ့သည်။ အင်ဖာသည် လူဦးရေ ၂၅၀၀၀၀ ဦးကျော် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ဤငလျင်သည် မဏိပူရပြည်နယ်တွင် ၁၈၈၀ မှ ၁၉၃၉ အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်များတွင် ပျက်စီးမှုအများဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။
India ၆ ၂၀၀ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Das၊ Biswajyoti။ "Quake strikes northeast India, Bangladesh; 11 dead, nearly 200 hurt"၊ Reuters၊4January 2016။ 23 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 18 September 2020။
↑ M6.7 - 29km W of Imphal, India။ United States Geological Survey။3January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rai Durgesh C., Kaushik Hemant B. and Singha Vaibhav (2017) M 6.7,4January 2016 Imphal earthquake: dismal performance of publicly-funded buildings; CURRENT SCIENCE, VOL. 113, NO. 12
↑ Cardoz, Praveen (12 January 2016). "Improper Before, Inadequate After" Archived7October 2018 at the Wayback Machine., The Global Feed.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Gahalaut, V. K. (2016-10-12). "Seismological, geodetic, macroseismic and historical context of the 2016 Mw 6.7 Tamenglong (Manipur) India earthquake". Tectonophysics 688: 36–48. doi:10.1016/j.tecto.2016.09.017. Bibcode: 2016Tectp.688...36G.
↑ Bangladesh Earthquake Warning။ Atn24online။6August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၆_အင်ဖာငလျင်&oldid=727581" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။